लक-डाउन र कर्फ्यूमा के फरक? :: सन्जिब बगाले :: Setopati
लक-डाउन र कर्फ्यूमा के फरक?
सन्जिब बगाले काठमाडौं, चैत ११
‍लक डाउनपछि मंगलबार सुनसान काठमाडौं। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले चैत १८ गतेसम्म देशभर 'लक-डाउन' गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक कुनै पनि सवारी आवागमन र मान्छेको हिँडडुलमा समेत रोक लगाइएको छ। 'लक-डाउन' पालना गराउन सडकमा प्रहरी परिचालन गरिएका छन्।
महामारी बेला लागू हुने यस किसिमको लक-डाउन र विगतमा हामीले भोगेको कर्फ्यूबीच के फरक छ भनेर धेरैले जिज्ञासा राखेका छन्। हामीले यसबारे पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीसँग कुरा गरेका छौं।
'महामारी फैलिएको बेला मान्छेहरू बाहिर निस्किँदा उनीहरूलाई नै गम्भीर असर पर्छ भनेर लक-डाउन गरिन्छ। यसमा अवस्था हेरेर कहिले घरबाटै निस्किन रोक लगाइन्छ भने कहिले एउटा सहरबाट अर्कोमा मात्र जान दिइँदैन,' पूर्व गृहसचिव रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार, लक-डाउन भनेको सरकारले जनताको विवेकमाथि गर्ने विश्वास हो। जनता महामारीको अवस्था विचार गरेर आफैं जिम्मेवार बनून् भनेर लक-डाउन गरिन्छ। 'देशमा यस्तो-यस्तो कारणले संकटको अवस्था छ, तपाईंहरू घरबाहिर ननिस्किनुस्, निस्किनुभयो भने परिवार र समाजलाई असर गर्छ भनेर सरकारले सार्वजनिक रूपमा गर्ने अपिल नै लक-डाउन हो,' उनले भने।
लक-डाउन गर्दा पनि जनता बाहिर निस्किन छाडेनन् र सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड जारी रह्यो भने सरकारले अवस्था हेरेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि पालना भएन भने बल्ल सरकारले कर्फ्यू लगाउने रेग्मीले बताए।
'कर्फ्यू र लक-डाउनमा धेरै फरक छ,' उनले भने, 'कर्फ्यू सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ। तोडफोड, ढुगांमुडा वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने अवस्था छ भने प्रशासनले कर्फ्यू लगाउँछ। यो शान्तिसुरक्षा कायम राख्न अपनाइने उपाय हो।'
'जनताले लक-डाउन उल्लंघन गरे सुरक्षाकर्मीले सम्झाउँछ, त्यति गर्दा पनि भएन भने सामान्य बल प्रयोग गर्न सक्छ,' उनले भने, 'कर्फ्यू उल्लंघन गर्नेलाई सामान्यतया सम्झाइबुझाइ गरिँदैन, देख्नासाथ गोलीसम्म हान्न सक्ने आदेश हुन्छ।'
उनले यो पनि भने, 'कर्फ्यू बिल्कुलै सुरक्षा मामिलासँग जोडिन्छ। प्रकारान्तरले कोरोना भाइरस पनि शान्ति सुरक्षासँगै जोडिन्छ तर यो घुमाउरो कुरा हो।'
पूर्व गृहसचिव रेग्मीका अनुसार, लक-डाउन सुरुआती अवस्था हो। त्यसपछि निषेधाज्ञा र निषेधाज्ञा पनि प्रभावकारी नभए कर्फ्यू लाग्न सक्छ।कर्फ्यू पनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा संकटकाल घोषणा हुनसक्छ।
'संकटकालमा भने जनता मौलिक अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन्छन्। संकटकाल घोषणा गर्ने बेलामै यस्ता-यस्ता अधिकार खोसिनेछ भनेर सूचना जारी गरिन्छ,' रेग्मीले भने।
उनले अगाडि भने, 'मान्छेले टेरेनन्, घरबाट निस्किन थाले, जथाभाबी गर्न थाले भने सरकार संकटकाल लगाउन बाध्य हुनसक्छ।'
अहिलेको लक-डाउन जरुरी भए पनि हतारमा गरिएकाले सर्वसाधारण जनताले अत्यावश्यक वस्तु जोहो गर्न समय नपाएको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ११, २०७६, २२:००:००